Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Dika tamin’ny Jona 2019
Dika · Jona, 2019
Jona 2019 30 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Dika tamin'ny Jona, 2019
28 Jona 2019
Translator Newsletter: Fianarana asa ao amin'ny Firenena Mikambana, Fahaizana fiteny roa sy fahalalana ara-tsosialy ary tantara hafa!
Mpanoratra Marianna Breytman · fandikàna-gazety
Amin'ny maha-mpandika teny mahaleotena miasa ho an'ny sampan-draharahan'ny fandikan-teny, mpitantana tetikasa ny ankamaroan'ny sasany amin'ireo olona ifandraisantsika. Nametraka ity lisitra toro-hevitra ity ho an'ireo mpandika teny mahaleotena vaovao, mivantana avy amin'ireo mpitantana tetikasa ny olona mahafinaritra ao amin'ny The Savvy Newcomer
Translator Newsletter: Atidoha mahay fiteny roa, Fahatakarana Manerantany sy tantara hafa!
Mbola fiteny manerantany amin'ny aterineto ve ny teny Anglisy? Tech Insider milaza fa izany tokoa ... hatramin'izao.
26 Jona 2019
Gloval Voices: Tetezana mampifandray fomba fijery maro
Mpanoratra Mario Lopes · Blaogim-Piarahamonina GV
Efa zazalahy be ahiahy hatrany aho hatramin'izay. Mihamanjavona ny fahanginan'ireo tantara madinika nahafinaritra afaka nobanjiniko teo amin'ny fiainako andavanandro ary indrisy fa mijanona ho voafetra ao anatin'ny fahatsiarovan'ireo niaina azy na ao anatin'ny fanahin'ny fitantarana ataon'ireo manam-bitana izay afaka niditra tamin'izany antsoina loatra hoe fampahalalam-baovao izany, zava-mitranga matetika ao Afrika.
Translator Newsletter: Rehefa tsy adika, Ny lahy sy vavy eo amin'ny fiteny sy ny maro hafa!
Araka ny mety ho fantatrao amin'ny fiteny maro, manana ny sokajiny ny anarana. Amin'ny teny Espaniôla, ohatra, vavy ny seza ary lahy ny vata fampangatsiahana. Ny fiteny Anglisy anefa dia manalavitra izany amin'ny ankapobeny ary tsy mampiasa sokajy mba hamaritana ireo tsy olombelona. Ahoana no nahatonga izany?
Translator Newsletter: Lisitra maro, fikatrohana amin'ny fandikan-teny sy ny maro hafa!
Amin'ny taonina ireo hevi-diso momba ny indostrian'ny fandikan-teny miely any ho any -- sehatra efa ho faty io, fifanakalozan-kevitra fotsiny, ary maro lavitra noho izany. Nandray ny raharaha ry zalahy ao amin'ny Business 2 Community ary nanangana lisitra antsoina hoe "Zavatra 11 maha-tsy izy ny Fandikan-teny" mba hanesorana ireo anganongano faheno...
Translator Newsletter: Fivoaran'ny fiteny, Ny Polyglotte (mpahay teny maro) tanora indrindra ary tantara maro hafa!
Zava-misy malaza ny hoe miova miaraka amin'ny fotoana ny fiteny. Saingy raha mbola miova ny hevitry ny teny sy ny fomba ampiasantsika azy ireo, moa ve tsy hiafara amin'ny fiteny vaovao tanteraka isika?
Translator Newsletter: Rakibolana ho an'ny mpitsoa-ponenana, Brexit sy ny maro hafa!
Andeha hatomboka amin'ny fanamarihana tsara ny herinandro! - Nivondrona ny mpianatra ao Norwood mba hamorona fitaovana ho an'ireo mpitsoa-ponenana Syriana sy ny fianakaviany monina ao amin'ny faritra misy azy ireo.
Translator Newsletter: Fitarihana ALTA, Fiteny Manerantany sy maro hafa!
Mpanoratra Marianna Breytman · Mediam-bahoaka
Rehefa mampitombo ny asantsika amin'ny maha-mpandika teny isika, dia matetika manontany tena hoe firy ny fotoana tokony laniana amin'ny haivarotra. Corinne McKay manana ny valiny amin'ity fanontaniana ity ary valiny bebe kokoa ao amin'ny bilaoginy
24 Jona 2019
Translator Newsletter: Mampody indray ny atidoha, fitiavana amin'ny fandikan-teny sy maro hafa!
Fantatrao ve fa mamerina indray ny atidohanao ny fahaizana fiteny roa? Araka ny voalazan' ity lahatsoratra mahafinaritra avy amin'ny World Economic Forum sy Quartz ity, dia "milaza ny mpikaroka fa afaka manova tanteraka ny rafitry ny atidohanao ny fifehezana fiteny roa".
Translator Newsletter: Fampianarana, Lalao an-dahatsary sy maro hafa!
Amin'ny maha-mpandika teny mahaleotena, zava-dehibe amin'ny fivelomana ny mahazo karama amin'ny asanao ara-potoana! Saingy matetika manahirana ny mitady mpanjifa maro sy fifanarahana isan-karazany. Alessandra Martelli, mpandika teny mipetraka any Turin, Italia, nametraka ity lisitra mahafinaritra ity izay ahitana toro-hevitra mikasika ny fomba hahazoanao karama ara-potoana amin'ny asa mafy ataonao.